Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Waxyaabaha soo socda ayaa sharxaya macluumaadka asturnaanta mana aha in loo fahmo inuu yahay qandaraas. Waxay sharraxeysaa sida Dugsiyada Dadweynaha ee loo yaqaan 'Stillwater Area Schools' (oo hadda kadib loogu yeero "Degmo") ay macluumaadka ugu uruuriso degelkeeda, u isticmaasho macluumaadkaas iyo xaaladaha ay macluumaadka ku wadaagaan. Degmadu waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho dukumintigan asturnaanta waqti kasta ogeysiis la'aan.
Adiga oo booqanaya degelka degellada ama degellada kale ee rasmiga ah ee degmada (tusaale, degellada websaydhka dugsiga), waxaa la soo ururiyaa macluumaadka sida bixiyaha Internetka, websaydhka tixraaca, nidaamka hawlgalka, shabakadda internetka, cinwaanka IP, iwm Macluumaadkan kuma xirna shaqsiyaadka shaqsiyaadka ah. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa in si fiican looga caawiyo Degmadu inay fahamto sida loo isticmaalo websaydhkooda waxayna soo jeediyaan siyaabaha lagu horumarin karo.
Macluumaadka Shakhsiyeed La Bixiyay
Macluumaadka shaqsiyeed ee booqdehu bixiyo, sida foomka oo kale, waxaa la uruuriyaa oo keliya marka ay Degmadu aaminsan tahay in macluumaadka ay waxtar u leedahay bixinta adeeg gaar ah oo la doonayo, oo ku xiran macluumaadka la soo gudbiyey. Haddii booqdehu uusan bixin macluumaadkaas, adeegga gaarka ah waxaa laga yaabaa inaanay helin booqdahaas. Macluumaadka shaqsiyeed waxaa la codsadaa oo keliya markii loo baahdo si ugu wanaagsan ee adeegga loo bixiyo. Tan waxaa ka mid ah adeegyada sida helitaanka nidaamyada macluumaadka, sahaminta, diiwaangelinta, soo gudbinta faallooyinka / su'aasha, iwm.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee la siiyay 834 waxaa lagu sifeeyay inay yihiin xog guud, mid gaar ah ama mid aan dawli ahayn. Macluumaadka khaaska ah ama aan dadweynaha ahayn lama siin doono dhinacyada saddexaad iyada oo aan la helin ogolaanshaha qoraalka ah ee qofka ama amar maxkamadeed ilaa ay codsadaan Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka ama haddii kale lagu bixiyo sharci ahaan.
Macluumaadka la bixiyay ee aan lagu sifeyn inuu yahay mid gaar loo leeyahay ama aan ahayn mid dowladeed sida uu dhigayo sharciga gobolka ama federaalka waxaa lagu sifeeyay inay yihiin xog guud. Sidan oo kale, xogtaas waa in loo soo bandhigaa dadweynaha codsi gaar ah. Xogta dadweynaha ma aqoonsana shaqsiyaadka.
Degmadu kama iibiso, wadaagto, ka ganacsato ama ka ijaarto macluumaadka shakhsiyeed dhinacyada saddexaad.
Qaar ka mid ah codsiyada websaydhka iyo websaydhadu waxay adeegsadaan tikniyoolajiyad loo yaqaan 'cookies'. Kuwani waa wax aad u badan oo waa faylal yaryar oo ku kaydsan kombuyuutar booqde websaydh ahaan si ay si fiican ugu adeegaan booqdaha websaydhka. Macluumaadka isticmaalaha kuma uruurinin Degmadu iyada oo loo marayo cookies-ka aan ka ahayn kan loo baahan yahay in lagu socodsiiyo codsi websaydh gaar ah oo laga helo booqdaha websaydhka
Degmadu waxay leedahay nidaamyo lagu hubinayo hufnaanta xogta, saxsanaanta iyo amniga inta la taaban karo si ugu wanaagsan ee loogu adeego booqdayaasha websaydhka. Soo booqdeyaasha shaqsiyeed waxay dib u eegi karaan xog kasta oo websaydh ah oo laga soo ururiyey naftooda oo degmadu ku hayso shakhsiga si loo xaqiijiyo saxnaanta.
Degmadu waxay siisaa xiriiriyeyaal ka baxsan goobaheeda bogagga kale ee aysan dayactirin degmada ama hay'adaha ku xiran degmada. Sida oo kale Degmadu mas'uul kama aha waxyaabaha ku jira websaydhyada ama websaydhyada ku xiran. Websaydhada dibedda ee tixraacaya wax soo saarka, adeegyada ama wixii la mid ah macnaheedu ma aha inay ansaxisay Degmadu. In kasta oo Degmadu isku dayeyso inay ku xirnaato boggagaas oo waafaqsan himilada degmada, ma xakamayn karto waxyaabaha ku jira barahaas.
Haddii aad u baahato inaad la xiriirto Degmada waqti kasta, waxaad kula soo xiriiri kartaa badhanka "Jawaab celin " ee ku taal bogga hoose ee bog kasta.